Shan sano kadib Istish-haadkii Sheekh Usaama sidee looga hadal hayaa Caalamka? – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Shan sano kadib Istish-haadkii Sheekh Usaama sidee looga hadal hayaa Caalamka?
On May 3, 2016 272 1
2 May sanadkii 2011 waxaa magaalada Abutabad dalka Pakistaan guri uu ka degnaa Sheekh Usaama bin Laadin weeraray Askar katirsan Ciidanka Mareykanka, kuwaas oo halkaas ku dilay Sheekha kadib dagaal In muda ah socday.
Saacada kadib howgalka Mareykanku fuliyay waxaa shir jaraa’id oo deg deg ah qabtay Madaxweynaha Mareykanka Brack Obama kaas oo ku faanay iney dileen ninkii ugu sarreeyey waxa uu ugu yeeray Argagaaxisada oo uula jeedo Mujaahidiinta.
Inkastoo dowladda Mareykanku ogayd in dilka Jihaadka uusan ku joogsaneyn Istish-haadka hogaamiye hadana waxay dilka Sheekh Usaama k dhigatay Aalad diyaacad ah oo Shacabka dalkaas ku dejiso, islamarkaana dareensiiso in kuna qanciso in la dilay ninkii ka dambeeyey weeraradii 11 September.
Shacabka Mareykanka oo lagu tilmaamo wax magarad ayaa ku kedsoomay hadaladii Obama waxaana ay is tuseen in Amaankoodu markan soo hagaagi doono, islamarkaaana ay si nabad geliyo ah ku mari doonaan wadamada Caalamka, balse hada waxa uu Shacabka Mareykanka qirayaa in dilka Sheekh Usaama uusan waxba ka bedelin amaankooda marka laga reebo iney cabsi dheeraad ah dareemayaan.
Shan sano kadib Istish-haadka Sheekh Usaama bin laadin waxa uu Jihaadka ku faafay wadamo aanu horey uga istaagin, waxaana kamid ah Masar, Liibiya, Tuunis, Suuriya iyo kuwa kale oo dhamaantooda ah wadamo uu Shiikh Usaama ku taamayay in mar un laga taago Raayada Jihaadka.
Marka laga hadlo awooda Mujaahidiinta Alqaacida ma ahan wax lasoo koobi karo, waxaana laga dareemayaa muuqaallada iyo maadooyinka ay soo saaraan faracyada Alqaacida oo Mujaahidiinta Soomaaliya ay ku jiraan, kuwaas oo lasoo baxay dar-dar dagaal oo aan horey loogu arag taariikhda Jihaadka Soomaaliya.
Istish-haadka Sheekh Usaama bin laadin waxay faracyada Alqaacida badankood kasoo baxeen cuzladii ay ku jireen, iyagoona haatan maamulaya masaaxaad aan lasoo koobi karin, taasna waa mid kamid ah riyooyinkii Sheekh Usaama bin laadin oo xaqiiq noqday.
Barta Twitterka ee CIA-da ayaa lagu baahiyay mar kale khabarka ah iney dileen Sheekh Usaama bishii May sanadkii 2011, balse qoraalkaas waxaa jawaabo jees jees ah ka bixiyay shacabka Mareykanka oo hadda arkay inuu daganaa.
CIA-da ayaa rajeyneysa ama fileysay fariimo hambalyo ah oo shacabka Mareykanku hawada usoo mariyo, balse taas bedelkeed waxaa laga hor geeyey su’aalo ad adag oo ay kamid tahay iney keenaan jasadka Sheekh Usaama bin laadin, halka dadka qaar ee Ameerikaanka ahaay beeninayeenba in Sheekh Usaama uu ku baxay gacanta Mareykanka.
Arinka shacabka Mareykanku haanta isku waafaqsanyahay ayaa ah in dilkii Sheekh Usaama bin laadin uusan waxba kusoo kordhin amaanka Mareykanka aan ka ahayn cabsida iyo qal qalka oo sii kordhay, waxaana ay wada ogyihiin in weeraro badan oo Mareykanka gudihiisa ka dhacay iyo kuwa dhici doono ay aargud u yihiin Sheekh Usaama bin laadin.
marwaan says 6 years ago
janadi firdowsa allah kawarabiyo shekha